Shiinaha DTU ZD3030 Soo-saar iyo Warshad | ChiLink
Shabakada WCDMA / HSDPA / HSUPA
RS232 / RS485 / TTL dekedda
● Taageer xarumaha xogta laba-geesoodka ah, mid weyn iyo keyd kale
U fidiyaan softiweer maareyn ah maamulka fog
ZD3030 IP MODEM waa nooc ka mid ah qalabka kumbuyuutarrada gacanta iyo kumbuyuutar kumbuyuutar ah oo loogu talagalay Internetka Waxyaabaha, kaas oo isticmaala shabakadda dadweynaha ee NB-IoT GPRS / CDMA / WCDMA / EVDO si ay u siiso dadka isticmaala howlaha gudbinta xogta fog ee wireless-ka. Badeecaddu waxay isticmaashaa xoog-wershede-wershado heer-hooseeya ah oo 32-bit ah iyo noocyo farsamooyin heer-sare ah oo wershedo ah, iyadoo lagugu rakibay nidaam-hawlgal-waqtiga-dhabta ah oo ah barnaamijka taageerada barnaamijyada waxayna siisaa dekedda RS232 / TTL iyo RS485 oo si habboon oo daah-furan ugu xidhi kara hal qalab shabakad taleefan gacmeed ah, oo kuu oggolaaneysa inaad ku xirnaato qalabkaaga taxane ah ee jira oo keliya qaabeynta aasaasiga ah
Badeecadani waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa aagagga M2M ee silsiladda warshadaha IoT, sida gaadiidka caqliga leh, bixinta biyaha, shabakadda casriga ah, guriga caqliga leh, maaliyadda, boosteejooyinka moobiilka ee loo yaqaan 'POS terminals', otomatiga silsiladda keena, otomatiga warshadaha, dhismayaasha casriga ah, ilaalinta dabka, amniga guud , ilaalinta deegaanka, saadaasha hawada, daaweynta caafimaadka dhijitaalka ah, sahaminta dareenka fog, milatariga, sahaminta hawada, beeraha, dhirta, arrimaha biyaha, macdanta dhuxusha, baaritaanka kiimikada iyo meelaha kale, iyo wixii la mid ah.
· Wax soosaarka warshadaha ee caadiga ah, EMC naqshadeynta ka hortagga faragelinta, la qabsiga deegaanka ee xoogga leh;
· Qalabka fiirsashada ee gundhigga ahi wuxuu bixiyaa habab kala duwan oo dib-u-dejin ah, oo lagu xakameyn karo softiweerka si loo gaaro hannaan dammaanad-warshadeed oo kaamil ah;
· LSupport casriyaynta fog, barnaamijka DTU waxaa lagu casriyeyn karaa iyadoo loo marayo Server FTP ；
· Hab maamuuska isgaarsiinta xogta sare iyo mid adag, iyadoo la saxayo qaladka iyo sirta. Gudbinta xogta ma waayi karto baakadaha, waxay ku wareejin kartaa in ka badan 100k sawirro iyo feylasha animation flash, ma muuqan doonaan mosaic dhacdo;
· L Waxay leedahay shaqo awood leh waxayna taageertaa seddex qaab oo shaqeynaya: DTU (nidaamka caadiga ah), SMS modem iyo modem. Habka DTU, waa habka gudbinta xogta GPRS waxayna u diri kartaa xogta dekedda taxane ah (RS232 / RS485 ama TTL) ee qalabka isticmaalaha serverka internetka. Habka 'DTU', wuxuu sidoo kale ku heli karaa farriimo gaagaaban oo SMS ah (marka uu dirayo farriimaha gaagaaban, wuxuu u baahan yahay inuu u beddelo SMS illaa IO dekedda); Habka modemka SMS waa qaabka gudbinta SMS-ka, adeegsadayaashuna waxay dejin karaan nooc (hab maamuus ah) iyo nooca B (hufan) qaabka gudbinta SMS; Markaad isticmaaleyso qaabka modem, waxay ku habboontahay heerka tilmaamaha (gsm07.05 iyo 07.07). Isticmaalayaashu waxay ku dhammaystiri karaan howlaha loo baahan yahay iyagoo ku qoraya midkooda barnaamijyada wax lagu barto;
· Kala beddelashada qaabka u dhexeeya DTU iyo modemka SMS ayaa lagu qaabeyn karaa iyada oo loo marayo softiweerka qaabeynta isticmaaleha, iyo qalabka adeegsadaha sidoo kale wuxuu si jajab leh u qaabeyn karaa qaabka shaqada illaa dekedda IO inta lagu jiro isticmaalka; Habka 'Modem' waa in la qaabeeyaa iyadoo la dirayo tilmaamaha qaabeynta marka isticmaalaha uu ku shaqeynayo;
· Taageer siyaabo badan oo isku xirka tooska ah: isku xirka sheyga beddelka shabakadda ee sheyga zr2000, iyo isku xirka zd3030 oo leh isla nooc ka mid ah sheyga zd3030 (ku habboon isticmaalka GPRS bilaa internet), adigoo ogaanaya hal-hal iyo hal xiriir badan;
· Nidaamka diiwaangelinta otomaatiga ah ee IP wuxuu xaqiijin karaa noocyo kala duwan oo adeegyo ah wuxuuna dhisi karaa nidaam aad u ballaaran oo ballaaran oo codsi wireless ah ah
· Hurdo fog iyo toos: Waxaad u isticmaali kartaa taleefanka nambarka cayiman si aad u garaacdo lambarka DTU si aad u seexato una soo toosto DTU, taas oo ku habboon dadka isticmaala inay seexdaan marka aysan isticmaalin DTU, waxayna si weyn u badbaadineysaa qiimaha taraafikada ;
· Wax-ka-beddelka fog ee cabbiraadaha DTU: taageeridda beddelka SMS-ka ee cabbirada DTU iyo wax ka beddelka shabakadda ee cabbirada DTU;
· Shaqada heeganka ee isgaarsiinta ee xoogga badan: haddii shaqada adeegga heeganka la daarto, xiriirka ka dhexeeya adeegaha weyn iyo adeegaha heeganka ayaa si otomaatig ah loo beddeli karaa. Marka adeegaha ugu weyn uu leeyahay dhibaatooyin, wuxuu si toos ah ugu xirmi doonaa serverka heeganka ah;
· Taageerada barnaamijka softiweerka ee awoodda badan, codsiga barnaamijka softiweerka sanado badan, awood badan, qaan gaar ah oo qumman;
Hore: Serial Server SS2030
shaqada aasaasiga ah Gelitaanka tcp / ip protocol
Heerka gundhigga ah ee waxbarista (gsm07.05 iyo 07.07)
Taageerada tilmaamaha kordhinta
Taageero SMS, USSD, CSD
Gudbinta xogta hufan
Taageer cinwaanka IP-ga ama magaca xogta xarunta magaca, iyo taageerida APN gaar ah
GSM / GPRS Qeybta soo noqnoqota ： GSM850MHz / EGSM 900MHz / DCS1800MHz / PCS1900MHz
GPRS Saldhigga Mobilada Fasalka B
GPRS ： CS1 ~ CS4wasakhda korantada ： Habka ka baxsan 100 <100uA
Habka jiifka 3 <3mA (celcelis)
Habka hadalka （GSM900, PCL = 5 ： 200mA
Habka xogta （GSM900, PCL = 5, Class12 ： m 300mA
Fiinta ： 2.0Axasaasi ： GSM 850 ≥ -106dbm
PCS 1900 ≥ -106dbmLa jaanqaadi kara heerka waxbarashada (gsm07.05 iyo 07.07)
Taageer tilmaamaha kordhinta ALT
Gelitaanka TCP / IP
Lambarka taxanaha ah
VCC AWOOD: DC5-24V
GND Dhulka Power
UTXD1 Soo dirista dekedda Serial (DTU dekedda serial / RS485 a) (oo ku xiran isticmaalaha helaya dhamaadka / RS485: a)
URXD1 Qaadashada dekedda Serial (DTU dekedda serial / RS485 b) (oo ku xiran gudbiyaha isticmaalaha / RS485: b)
Soo Saarkii1 Wareeg badeecada wax soo saarka 1 ayaa loo habeyn karaa sida RTS terminal xakamaynta socodka qalabka (nidaamka caadiga ah: wax soo saarka1)
Gelinta1 / RST Beddel terminal aqtiga 1; Isticmaaluhu wuu habeyn karaa RST terminal terminal (nidaamka caadiga ah: gelinta1)
GND Saldhigga dekedda Serial
Soo saar2 Wareeg badeecada wax soo saarka 1 ayaa loo habeyn karaa sidii qalabka xakamaynta socodka qalabka CTS (nidaamka caadiga ah: wax soo saarka2)
XAALADDA On line waa heer sare, off khadka ama signal daciif ah waa heer hoose
SW / Gal 2 DTU, qaabka isbadalka qaabka SMS, heerka sare waa DTU, heerka hoose waa SMS, isticmaale wuu u habeyn karaa inuu beddelo terminal aqbasho 2 (nidaamka caadiga ah: SW)
Xuduudaha korantada Danab shaqeeya DC 5V ～ 16V
Sugitaan: <40mA @ 5V
Xiriirinta: <300mA @ 5V
Qiiqa hawada ka baxa: 1 5A @ 5V
Xuduudaha deegaanka Heerkulka shaqada - 30 ℃ ～ 80 ℃
Heerkulka keydinta - 40 ℃ ～ 85 ℃
Qoyaanka qaraabada ah: 20% - 95% (uumag ma laha)